Ikhaya likaKiara - Igumbi Elithokomele eMorrocan Villa
Đằng Hải, Hải Phòng, i-Vietnam
Ikamelo e-i-villa ibungazwe ngu-Kiara
U-100% wezivakashi zakamuva unikeze u-Kiara izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
Itholakala esigodini sezimbali, esisanda kwakhiwa, Ikhaya likaKiara liyindawo ekahle yokuphumula nokubaleka esiphithiphithi sempilo yasedolobheni. Ngomklamo wesimanje ohlanganisa ifenisha nezinsiza zekhwalithi ephezulu, kulandele isitayela saseScandinavia esinezihlahla eziluhlaza nxazonke. I-villa inengadi yama-rose ophahleni lwendlu, lapho ilungele amaqembu. I-villa yonke ayiklanyelwe kuphela ukunikeza uhla olujwayelekile lwenkonzo kodwa futhi ukunikeza impilo entofontofo kuzo zonke izivakashi ezizoza zizohlala nathi.
- Igumbi lokulala elihlukile elinendawo yokugezela elula, imibhede emibili engu-1.6mx2m. Ngayinye futhi inesethi yetafula nezihlalo kuvulandi ukuze uphumule, itafula lokusebenza, i-smart TV, i-Wifi esheshayo.
-Ikhishi: Isiqhingi sasekhishini, itafula lokudlela, isiqandisi, i-induction hob, i-oven microwave, ihhavini, umshini wokuwasha izitsha, izinto zokupheka.
-Isitezi sesithathu: Indawo yokuphumula lapho ungajabulela khona inkomishi yetiye noma yekhofi futhi ufunde incwadi. Lapha kulapho ingadi yethu yama-rose ikhona, siphinde sibe ne-BBQ grill mat (sidinga ukubhuka, izimali ezengeziwe)
- Siyajabula ukuqondisa izivakashi zethu indlela yokukhetha noku-oda izitsha ezijwayelekile ze-Hai Phong cuisine (zingalethwa ngqo ekhaya likaKiara) ezinekhwalithi ephezulu futhi amanani anengqondo. Kuyajabulisa futhi ukuthi sikuqondise ukuthi ungahamba kanjani edolobheni, uhambe uye ebhishi le-Do Son, isiqhingi saseCat Ba, nezinye izinto ezikhangayo e-Hai Phong.
- Sinendawo ehlukene yezilwane ezifuywayo
- Ikhishi linezinsiza ezihlome ngokuphelele, izinongo eziyisisekelo ongazipheka, uma ufuna ukuvula iphathi, udinga ukubhuka nathi (izimali ezengeziwe)
- Izindlela ezihlukene zokuya ekamelweni
- Indawo ngayinye inegumbi lokugezela
- I-air conditioner
- Isifudumezi samanzi sikagesi
- Indawo yokupaka izimoto (ubukhulu: 2)
4.68 ·44 okushiwo abanye
UMam Kiara uthanda ukuchitha isikhathi nawe, akubonise futhi akukhuthaze ngazo zonke izinto esizaziyo nge-Hai Phong. Uma ufuna ukufunda ukudla okudliwayo njengowasendaweni, sinekilasi lethu lokupheka elikufundisa izitsha zangempela ze-Vietnamese ezingaphezu kwalokho obuvame ukukuthola ku-Lonely Planet naku-TripAdvisor. Angathanda ukwabelana nani nonke.
UMam Kiara uthanda ukuchitha isikhathi nawe, akubonise futhi akukhuthaze ngazo zonke izinto esizaziyo nge-Hai Phong. Uma ufuna ukufunda ukudla okudliwayo njengowasendaweni, sinekil…
UKiara Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Đằng Hải namaphethelo